विमानस्थलमा मिन्स्क-2 सडक। प्राप्त गर्न तीन तरिका
बेलारुस मा, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राजधानी 40 किमी छ। यो 30 भन्दा बढी वर्ष संचालित। वर्तमान मा, मिन्स्क-2 विमानस्थल पुनर्निर्माण काम बाहिर छन्। यहाँ मात्र होइन भित्री र बाहिरी आधुनिक, तर पनि यात्री सेवा गुणस्तर सुधार गर्छ। यसलाई सजिलै देखिने छ, र विमानस्थल सेवा कि परिवहन प्रकार विस्तार गर्न।
विमानस्थलमा के प्राप्त गर्न?
गर्न मिन्स्क-2 हवाई अड्डा पूर्व महंगी तरिका र सस्ता विकल्पको रूपमा पुग्न सकिन्छ।
दैनिक मार्ग "मिन्स्क - हवाई अड्डा" शटल ट्याक्सी, बसें, ट्याक्सी र पनि रेल। तीमध्ये कुनै पनि यसको आफ्नै फाइदा र बेफाइदा छ। , यात्रु सयौं, सोच छन् हरेक दिन "कसरी प्राप्त गर्न" मिन्स्क-2 हवाई अड्डा शहर देखि एक छोटो दूरी छ, तर अर्डर उडान अघि भयातुर हुन मा, यो परिवहन को सही प्रकार चयन गर्न आवश्यक छ। हामीलाई विधिहरू प्रत्येक विचार गरौं।
को पाङ्ग्राहरू को ध्वनि अन्तर्गत ... हामी रेल द्वारा पुग्न
मिन्स्क-2 एयरपोर्ट रेलका को केन्द्र जोडिएको छ। तपाईं स्टेशन "मिन्स्क-प्यासेन्जर" गर्न शहर बाहिर बाट आइपुगेपछि हुनुहुन्छ भने, यो विधि तपाईं सर्वश्रेष्ठ अनुरूप हुनेछ। त्यहाँ कही बैग र सूटकेस बोक्न, तपाईं बस अर्को एक रेल देखि सिट परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ कुनै आवश्यकता छैन छ। तपाईं के तपाईं मिन्स्क गर्न आउँदै छन् भने विमानस्थलमा र आगमन हल जाने आवश्यक छ भने, स्टेशन टिकट कार्यालयमा टिकट खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं अनलाइन टिकट आदेश गर्न सक्नुहुन्छ। रेल जहाँ तपाईं टिकट मूल्य मा समावेश गरिएको छ मूल्य जो एक बस, लिन छ विमानस्थलमा, मा स्टेशनमा आएको। रेल 7.30 देखि 22,30 शुरू, एक दिन5पटक चल्छ।
शटल बस वा ट्याक्सी?
सबैभन्दा मा मिन्स्क-2 विमानस्थल यात्री ढुवानी लोकप्रिय बसें र ट्याक्सी छन्। यो यात्रा गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका हो। एउटा सानो मूल्य लागि शटल बस 40 मिनेट र बस 1 घण्टामा शहर पुग्न सक्दैन।
"केन्द्रीय बस स्टेशन" तपाईं कुनै पनि दिशा मा टाउको गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ बाट, - शटल बस टर्मिनलमा स्टेशन, मेट्रो स्टेशन तपाईं लिन्छ। 300E र 173E: त्यहाँ विमानस्थलबाट दुई मार्गहरू छन्। वेबसाइटमा अनलाइन र सीधा चालक देखि, बक्स कार्यालय बस मा: यो टिकट विभिन्न तरिकामा खरिद गर्न सकिन्छ भनेर धेरै सुविधाजनक छ। मूल्य - बारे 1.5 अमेरिकी डलर। बसें सामान संग यात्रु को परिवहन लागि विशेष सुसज्जित छन्।
एक सानो छिटो चाहने ती लागि, तपाईं विमानस्थल हरेक आधा घण्टा गर्न स्टेसनबाट पठाइएका छन् जो ट्याक्सी गरेर शहर, ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ। टिकट साथै खरिद गर्न सकिन्छ बस मा रूपमा।
मूल्य, सामान परिवहन सहित2$ छ। Minibuses निःशुल्क वाइफाइ सुसज्जित छन्। मिन्स्क-2 विमानस्थल - Minibuses №1400 र 1430 धेरै सहज वातावरणमा मिन्स्क को दिशा मा स्थानान्तरण बाहिर। बस कार्यक्रम बस स्टेशन वा वाहक मा पाउन सकिन्छ।
एक छिटो ट्याक्सी। तर अधिक महंगा
ट्याक्सी - यो महंगा छ, र यस्तो दूरी मा, र सस्तो छैन। तर विमानस्थल र फिर्ता तपाईं सधैं ट्याक्सी मा समीर संग चल्न सक्छ। तपाईं विमानस्थलबाट आउँदै छन् भने तपाईं पक्कै पनि सडक मा क्याच भन्दा धेरै सस्ता छ जो एक ट्याक्सी, आदेश हुनेछ। मिन्स्क मा सीढी तपाईं लगभग लिन खुसी छन् जो कम्पनीहरु को धेरै वाहक छन्।
तपाईं विमान यात्रा गर्न योजना गर्दा मामला भर छैन र तपाईंले आफ्नो गन्तव्य विमानस्थल मिन्स्क-2 प्राप्त गर्न रुचि परिवहन कस्तो बारेमा पूर्व-लाग्छ। विस्तार गर्न ध्यान आफ्नो यात्रा। र विमानस्थल गर्न टिकट सुरु।
"KUBAN एयरलाइन्स" - विश्वसनीय र लाभदायक हावा वाहक
15 संसारमा सबै भन्दा राम्रो विमानस्थलको को
विमान Airbus-321: एक संक्षिप्त इतिहास र अवलोकन
संसारको एयरलाइन्स दर्जा: सुरक्षा र सान्त्वना
मासु को मासुको चोक्टा खाना पकाउन कसरी स्वादिष्ट
तेल - आफ्नो डेस्कटपमा तरल सुन
Ureaplasma जीवाणु। यो के हो?
Henrik Lundqvist - दिग्गज स्वीडिश आइस हक्की को "राजा"
Schalcon (लेन्स समाधान): वर्णन, प्रकार, प्रयोग र समीक्षा लागि निर्देशन
बल प्रशिक्षण। पुरुष र महिला लागि अभ्यास को जटिल शक्ति
"Kichko मा Saryn"। "को saryn Kichko मा" जसको अर्थ?